10 Mabaadi'da Baybalka ah Qof kasta oo Ganacsade Kirishtaan ah waa inuu raacaa | QODOBADA SALAADA
Bogga ugu weyn Ku noolaanshaha cibaadada 10 Mabaadi'da Baybalka ah Qof kasta oo Ganacsade Masiixi ah waa inuu raacaa
Maanta waxaan la tacaali doonaa 10 mabaadi'da Baybalka ah oo qof kasta oo ganacsade Masiixi ah uu raaco. Adduunka maanta, hormuudka dhaqaalaha ayaa ugu horreeya ganacsato iyo haween. Aad bay u adag tahay in la arko qof mushahar qaata oo noqda mid ka mid ah dadka ugu taajirsan meel kasta. Ganacsigu had iyo jeer wuxuu ahaa amarka lacag samaynta iyo ku -xirnaanta dhaqaala kasta. Si kastaba ha noqotee, sida ugu wanaagsan ee bilawga ganacsi waa, ogaanshaha mabaadi'da aasaasiga ah ee badbaadada ganacsiga waa arrin muhiim u ah milkiile kasta oo ganacsi waa inuu fahmaa. Mid ka mid ah qodobbada keenay guuldareysiga ganacsiga inta badan ganacsatada waa mabaadi'da ganacsi la'aanta
In kasta oo ay jiraan buugaag iyo seminaarro aan la tirin karin oo aad ka qayb geli karto sidii qof ganacsade ah, haddana, ma jiro mabda 'waxtar u leh sida kan ku qoran, gaar ahaan kuwa rumaystayaasha ah. Waxay kugu yaabin doontaa inaad ogaato in ganacsato iyo haween badan oo guulaystay aysan ahayn Masiixiyiin. Waxaad la yaabi doontaa sababta ay sidaas u tahay. Waxaad ka eegi kartaa google si aad u aragto liistada kuwa beddelaya adduunka. Dhanka kale, aad baad ula yaabi doontaa inaad ogaato in inta badan ganacsatadan guulaystay, in kasta oo aanay rumayste ahayn, iyagoo aan miyir qabin inay raacaan mabaadi'da kitaabiga ah ee u baahan kobcinta ganacsi kasta.
Dhibaatada ugu badan ee rumaystayaashu qabaan ayaa ah inaan si xun u isticmaalno nimcada. Xaqiiqda ah in nimcada Eebbe ay ku filan tahay oo aan baajin sharciga fudud ee dabeecadda. Tusaale ahaan, Ilaah ma rabo dhimashada dembilaha sababtuna waxay tahay Masiixa ayaa dunida yimid oo dhammaanteen noo dhintay. Hase yeeshee, taasi kama qaado ciqaabta dembiilayaasha. Waxa kaliya ayaa ah inaan ku badbaadnay nimco. Sidoo kale, xagga ganacsiga, waxaa jira mabaadii’da uu Eebbe ina waafajiyay si aan barwaaqo ugu noqonno meheradaheena. Dhibaatadu waxay tahay in rumaystayaasha badankoodu aysan si adag u raacin.
Haddii aad tahay rumayste iyo milkiile ganacsi, waa inaadan sida dadka kale samayn. Waa inaad ka fiirsataa go'aankaaga inaad raacdo mabaadi'dan ganacsigaaga. Xusuusnow mar walba inaad marka hore tahay Masiixi ka hor intaadan noqon milkiile ganacsi. Waxaan diyaarinnay liis mabaadi'da kitaabiga ah si ay kaaga caawiyaan kobcinta ganacsigaaga.
Xabaquuq 2: 2-3 Markaasaa Rabbigu ii jawaabay oo wuxuu igu yidhi, Riyada ku qor, oo looxyada ku caddee, si kii akhriyaa u ordo. Waayo, wixii lagu tusay weli waa wakhti la ballamay; Laakiin aakhirka wuu hadli doonaa, oo been ma sheegi doono. In kastoo ay raagto, sug; Maxaa yeelay, hubaal way iman doontaa, mana raagi doonto.
Meherad kasta oo aad qabato, waxaad u baahan tahay inaad yeelato qorshe habaysan. Qorniinku wuxuu leeyahay, Aragtida qor, oo looxyada ku caddee, si kii akhriyaa u ordo. Ganacsi kastaa wuxuu leeyahay himilooyinkiisa dhow iyo kuwa fogba. Hadafyadani had iyo jeer waxay u qoran yihiin sida qorshaha ganacsiga.
Qorshaha ganacsigu wuxuu ka caawiyaa ganacsiga inuu qeexo qaabka ay u shaqeeyaan. Waa aasaaska ganacsigu ku dhisan yahay. Markaa, adiga oo ah rumayste ku jira hal ganacsi ama mid kale, waa inaad u leedahay qorshe habaysan meheradda.
Ula macaamil Macaamiishaada iyo Shaqaalaha
Haddaba waxaad doonaysaan inay dad kale idinku sameeyaan, idinkuna sidaas oo kale u samee: waayo, kanu waa sharcigii iyo nebiyadii. (Matayos 7:12)
Waxaa mudan in la ogaado in mabda ’kasta oo aasaasi ah oo bani’aadam ahi asal ka leeyahay Qorniinka. Ula dhaqan dadka sida aad rabto in laguula dhaqmo, waana halka ay inta badan milkiilayaasha ganacsigu ku seegaan.
Adigu waxaad tahay madaxa meheraddu kaama dhigayso ilaah kuwa kaa hooseeya. Waa inaad barataa sida loola dhaqmo qof walba si xushmad leh, waana inay ka bilowdaa dadka kula shaqeeya - guusha ganacsigaagu waxay ku xiran tahay farxadda shaqaalahaaga. Qaddar shaqaalahaaga. Waxay ku dhiirrigelisaa inay u shaqeeyaan sida ay iyagu u leeyihiin meheradda.
Ula dhaqan si ixtiraam leh, weligiinna ma lumin doontid ixtiraamkaaga hawsha.
Ka Faa'iidayso Waqtigaaga
Efesos 5:15 Ka faa'iidaysiga wakhtiga, waayo maalmuhu waa xun yihiin.
Milkiilaha meherad ahaan, waa inaad waqti badan ku bixisaa qaabeynta xeeladaha ganacsigaaga. Waa inaad waqti badan ku bixisaa meheraddaada. Dunida ganacsiga, tartanku waa lama huraan. Waxaad la tartami kartaa ganacsiyada iyo summadaha kale. Waqtigaaga in ka badan waa in lagu qaataa sidii loo hagaajin lahaa ganacsigaaga.
Meheraddu waa inay ku jirtaa fikradahaaga had iyo jeer, oo waxa kaliya oo aad had iyo jeer u shaqeyso waa sidii aad uga fiicnaan lahayd tartamayaashaada.
Ku dadaal shaqadaada
Maahmaahyadii 22:29 Miyaad aragtaa nin shuqulkiisa ku wanaagsan? Isagu wuxuu istaagi doonaa boqorrada hortooda; Ma hor istaagi doono rag aan la garanayn.
Tani waa mid ka mid ah mabaadi'da ugu muhiimsan ee lagu guuleysto ganacsi kasta. Waa inaad ku dadaashaa shaqadaada. In kasta oo shaqada adag aysan si toos ah ugu tarjumin guusha, si kastaba ha ahaatee, Ilaah wuxuu leeyahay hab lagu abaal mariyo dadka. Qorniinku wuxuu leeyahay nin ku dadaala shuqulladiisa wuxuu hor istaagi doonaa boqorrada ee ma aha nin.
Waxaad la yaabi doontaa inaad ogaato sida ay u dadaalaan milkiileyaal ganacsi oo guuleysta in kastoo aysan ahayn rumaystayaal. Mabda'aan waxaa la siiyaa xeerar shaqeynaya iyadoon loo eegeyn cidda isticmaasha. Si kastaba ha ahaatee, annaga oo ah rumaystayaal waxaan leenahay dheef dheeraad ah. Markaad ku dadaashid shuqulkaaga, Rabbigu wuxuu barakeyn doonaa shuqulkii gacmahaaga, wuuna ku barwaaqayn doonaa.
Malaakii 3:10:11 KQA - Oo meeltobnaadyada oo dhan soo geliya bakhaarka, si gurigaygu cunto ugu jiro, oo haddaba taas igu tijaabiya, ayaa Rabbiga ciidammadu leeyahay, Haddaanan idiin furin daaqadaha samada iyo kuu soo shubo ducadan oo kale ah inaanay jiri doonin meel ku filan oo la helo. Rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay, Anigu idinka aawadiin baan u canaanan doonaa kan wax cuna, si uusan u baabbi'in midhaha dhulkiinna, canabkuna yuusan idinkaga bixin midhihii berrinka.
Bixinta toban meelood meel waa mabda’a axdiga oo u shaqeeya sida sixirka. Markaad toban meelood meel ka bixiso dakhliga, waxaad ku samaynaysaa meheraddaada. Waxay u keentaa dareenka Ilaah ganacsigaas. Xusuusnow Qorniinku wuxuu leeyahay, hadda tan igu tijaabi oo arag haddii aanan furi doonin daaqadaha samada oo aan kuugu shubi doono barako sidan oo kale ah inaanay jiri doonin meel lagu kaydiyo.
Eebbe wuxuu kaloo shaaca ka qaaday inuu u canaanan doono kii wax cunay aawadiin si uusan u baabbi'in midhaha meheraddaada. Waxaas oo dhami waxay dhici doonaan markaad bixisid meeltobnaadkaaga. Waxaa jira dhawr meelood oo quraanka ku qoran oo uu Rabbi dalbaday inaan isaga tijaabinno. Qaybtan ka mid ah Qorniinka ku saabsan bixinta tobnaad waa mid ka mid ah meelaha yar ee Kitaabka Quduuska ah. Maxaad maanta Rabbiga u tijaabin weyday.
article PreviousQodobbada Salaadda ee xoogga leh ee ka soo horjeeda Dhaxalka Xun
Next articleQodobbada Salaadda Awoodda leh ee Ka Soo Horjeeda Saamaynta Sharka
5 Sababood Oo Mu'miniintu Cabsida Ugu Noolaadaan
Shan Sababood Waa Inaad Korsataa Carruur Cibaado Badan
5 Siyaabood Oo Loogu Diyaar Garoobo Imaatinka Ciise
Ducada Eebbe Inuu Kula Hadlo
Micnaha Salaada Rabbi Aayada Aayaddiisa
28 tukasho oo loogu talagalay badbaadada kuwa la jecel yahay
20 Aayadaha Kitaabka Qudduuska ah ee Ku Saabsan Dhageysiga Carruurta